Guusha hordhaca ah ee Banaanbaxa Maanta (Faalo) - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Guusha hordhaca ah ee Banaanbaxa Maanta (Faalo)
Qabanqaabiyaasha mudaaharaadka/Banaanbaxa muqdisho ee 18/ 4/ 2019 weey guuleeysteen iyagoon lagaarin waqtigiisii. Hadafka mudaaharaad kastoo nabadeed waa
1 in dareenka shacabka lagaarsiiyo madaxda sare, taana si dhab ah baa muqdisho looga dareemay, Farmaajo habeenadii la soo dhaafay wuxuu ku xiiqay la kulanka qabiilada isaga oo ka codsanayo in la joojiyo mudaaharaadka, Booliskii baa jidka laga qaaday, qandaraasleeydii culimada, siyaasiyiinta iyo mutacalimiin isku sheegii baa hurdada laga kiciyay. Dowladii cabsi xad dhaaf ah baa ka muuqato. Guuxa dadweeynaha waa gaaray bartii lala rabay.
2. Waxuu keenay mudaaharaadka dhiiranaan siyaasadeed, dadkii muqdisho cabsan jiray baa jidadka la taagan Farmaajo ha dhaco. Gurigii cabsida uu Farmaajo labo sano dhisaayay baa dhulka lala simay, shacabka baa xuriyadoodii la soo noqday. Arintaan waa guul soo hooyatay intuu mudaaharaadka dhicin ayaana ay dhamaan guulahaas la gaaray. Farmaajo siyaasiyiinta haduu ceeyrsanjiray maanta waxaa hor taagan guuxa kumanaan arday, haween , dhalinyaro iyo odayaal leh oo ku qeeylinayo farmaajo down…
Waad guuleeysateen ee horeey u socda
W/Q Axmad Tiir
Previous articleWariye Coldoon oo xabsi kale loo Wareejiyay (Aqriso)
Next articleMuuse Biixi oo ku wajahan Imaaraadka Carabta